Ratsy toy ny biby - mety tsara ho an'ny ankizy ihany koa?
Ratsy toy ny biby fiompy
Mitazà raty ho biby fiompy raha mety
Ratsy no biby tsara indrindra ho an'ny ankizy ao amin'ny sekoly. Tsy mahagaga ihany koa ny mijery azy ireo, ny ankizy koa dia mianatra mikarakara biby kely ao anatin'ny fifandraisany isan'andro amin'ny alika madinika. Ankoatra izany, ny raty raha ny biby fiompy dia mitaky ny fiheverana isan'andro ary indrindra indrindra ny karazana vary.
Ankizy sy voalavo ho biby fiompy
Ratsy dia biby bitika izay tsy maintsy arahina amim-pitandremana. Mety hahatsikaritra izy ireo raha mahatsikaiky loatra.
Rehefa miala sasatra izy ireo, dia vetivety dia latsaka an-katezerana izy ireo ary manodina tsy mety. Ny fanosehana amin'ny rambony dia mety hiteraka fahavoazana lehibe. Ho an'ny ankizy kely dia tsy mety toy izany koa ny raty, toy ny ankizy miteraka henjana.
Ao amin'ny taom-pianarana fototra, ny ankizy dia manana fahafahana mihazona voalavo amim-pahendrena. Mandritra izany fotoana izany, miha-mitombo ny fahalianana amin'ny biby tsy mahazatra eo anivon'ny ankizy. Tsy ao anatin'ny ivon'ny fahalianana ireo kisoa sy kisoa guinea.
Matetika ny moto no mafana, fa mazàna kosa no mampifanaraka ny mpikarakara azy ary mazoto miasa amin'ny tolakandro.
Ny faharanitan-dry zareo dia mahatonga azy ireo ho tena mahaliana ho an'ny ankizy. Izay mivavaka tsy tapaka amin'ny biby, dia mihetsika haingana izy ireo. Tia karazany izy ireo, noho izany dia afaka mamela ny alikaola ny tompony kely rehefa mametraka ny tranom-borona. Ny kianja filalaovana feno rehetra dia azo atao avy amin'ny tonelina, boaty misy lavaka sy sombintsombin'ny taratasy ary zavatra hafa. Amin'ny fampiofanana klioba dia afaka mampianatra azy mora foana ianao.
Ny fomba tsara hiatrehana voalavo
Indrindra amin'ny voalohany dia zava-dehibe ny miaraka amin'ny fikarakarana ny biby miaraka amin'ny ankizy. Tokony hianatra hanatona ny tranom-bahiny mangina ianao rehefa miresaka mangina amin'ny biby.
Ho an'ny mpangataka amin'ny fambolena hazo dia tsara ny manapa-kevitra momba ny fividianana ho an'ny biby efa zatra. Raha tena te hanana biby kely be dia be ianao, dia mila miara-miasa amin'izy ireo isan'andro ianao, ka tena malemy izy ireo. Ny lehilahy dia somary mangina rehefa mifampiraharaha noho ny vehivavy.
Ankoatra izany, ny fampiakarana dia tsy maintsy ampiharina. Rehefa miala sasatra amin'ny biby ihany ny ankizy dia tsy mahasosotra azy amin'ny hetsika rehetra amin'ny raty, dia izao no fotoana ahafahana manosotra voalavo ao amin'ny cage tsy misy fanaraha-maso.
Tsy mahafaly azy ireo ny voalavo amin'ny làlana eny an-dalambe. Toa mahazaka izany matetika ny ankizy lehibe. Saingy ny adin-tsaina fotsiny amin'ny biby.
Ratsy dia manana fitondran-tena manokana. Faly fotsiny izy ireo toy ny biby fiompy, raha toa izy ireo no mihazona farafaharatsiny hatramin'ny fahatelo. Ny fambolena tsirairay dia ny habibian'ny biby. Ny fahatsapana fa ny ratim-pamonoana dia lasa malemy ihany rehefa mijanona irery izy ireo dia hevi-diso iombonana.
Ratsy toy ny biby an-trano
Ireo mpihaza manan-tsaina dia mila toerana malalaka. Ny tsara indrindra dia tranom-borona lehibe misy barazy maromaro, toy ny aviary vorona lehibe. Azo atao ny manamboatra araka izay tiany amin'ny fanamboaran-trano sy ny fanamafisana ny fahafaha-manao. Amin'ny raim-pianakaviana mahay, dia mety hovana ho trano fanasana vaovao koa ny trano fandroana taloha.
Ny sakafo dia mifangaro, satria ny ratina dia omnivores. Ny sakafo maina dia sakafo fihinanan-kena, voankazo masaka voa sy voa. Ankoatr'izay, ireo biby fiompy kely dia mila voankazo sy legioma isan'andro. Toy ny fikarakarana eo anelanelan'ny fofom-barimbazaha trano fandroana, yogourt, lava rongony, keky alikaola ary bibikely indraindray, toy ny crickets.
Ratsy izay voatahiry ho biby fiompy dia tsy misy ifandraisany amin'ny "voaloton'ny fandotoana" na ny voalavo brato. Izy ireo dia tany am-piandohana avy amin'ny voalavo fanandramana avy amin'ny laboratoara fanandramana biby, saingy tsy midika izany fa marary izy ireo.
Indrisy anefa fa tsy mihantitra izy ireo. Roa taona dia efa antitra ho an'ny mpihaza kely. Ny ankizy dia mianatra tsy azo ihodivirana fa tsy maintsy miala amin'ny biby fiompiny any aoriana. Etsy andaniny, tsy voafetra amin'ny voalavo ny lavaka, izay tombontsoa ho an'ny ray aman-dreny maro amin'ny saka sy alika.
Papo ho biby fiompy
Spiders ho an'ny biby fiompy
Mamono toy ny biby fiompy
Cats ho biby fiompy
Reptilia ho biby fiompy
Ny alika ho biby fiompy ho an'ny ankizy?
Trondro toy ny biby fiompy
Mianatra Pony toy ny Pet & Riding | Pets
Pets - Nahoana no biby manan-danja be?
Hamsterana volamena toy ny biby an-trano
Ny fandroako sy ny ahy - mihoatra noho ny fikarakarana ny vatana
Tantara fohy ho an'ny ankizy - biby fiompy toy ny ...